Ndị edemede 5 mere akụkọ ihe mere eme | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ndị edemede 5 mere akụkọ ihe mere eme
Carmen Guillen | | Ndị edemede, Akwụkwọ
Na ụwa akwụkwọ, dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọzọ, enweela aha dị ukwuu nke ụmụ nwanyị ndị emechiri ọnụ, zoo na ọbụna nyocha. Ndị ọzọ, ọ dabara nke ọma, amụrụ ha n'ọgbọ dị ugbu a ma nwee ike igosipụta onwe ha dịka ha chọrọ site na ide nnukwu ọrụ na aha mbụ na aha ikpeazụ.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara ọtụtụ n'ime ha, ma ndị nke zoro n'okpuru aha nwoke na ndị mere ya na ezigbo aha ha. Ma ụfọdụ ma ndị ọzọ adịla ma adị nnukwu ndị edemede mere akụkọ ihe mere eme. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmata ndị ahọrọ ma mara ntakịrị ihe gbasara nke ọ bụla, lee ụfọdụ data dị mkpa.
1 Gloria Fuertes (1917-1998) Ọ bụ ezigbo mmadụ.
Gloria Fuertes (1917-1998) Ọ bụ ezigbo mmadụ.
Onye na-ede Spanish nke agha nke mbu.
Abụ nke Ọgbọ nke 50 na "Postismo" (edemede uri).
O jikọrọ aka na imirikiti mmemme ụmụaka na ndị ntorobịa na TVE.
Nwanyi, na-agbachitere mgbe niile n’ihe odide ya, ịha nhata n’etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Pacifist na onye agha maka gburugburu ebe obibi.
Ihe dị mkpa maka abụ uri Spanish nke narị afọ nke iri abụọ.
O meela akwukwo ndi okenye, abu, akuko umuaka, ulo ihe nkiri wdg.
Ọ nwụrụ n'ọrịa cancer akpa ume.
Ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ọha na-ede akwụkwọ Bekee.
Nwanyị na onye edemede dị mkpa Ọchịchị Anglo-Saxon nke oge a nke narị afọ nke XNUMX.
O kwuru okwu n'ọtụtụ ederede banyere nsogbu ụmụ nwanyị nwere n'oge ahụ iji rara ndụ ha na ide.
O dere edemede, edemede, obere akụkọ, leta, wdg.
Ọ lụrụ onye edemede ahụ mgbe ọ dị afọ 30 Leonard Woolf.
Ọ bụ onye hụrụ n'anya nke onye edemede Vita Sackville-West, onye lụrụ Harold Nicolson mgbe ahụ. Mkpakọrịta ha dị ihe dị ka afọ 10 mana mgbe nke ahụ gasịrị, ha nọgidere bụrụ ndị enyi.
Ọ na-arịa ọrịa ụbụrụ. Nke a, ya na obi ịda mba ya, dugara ya igbu onwe ya na Machị 28, 1941. Ọ wụ na uwe mmiri jupụtara n’akụkụ osimiri Ouse.
Anọ n'ime ya njirimara njirimara bụ: "Oriakụ Dalloway", «Na laithaus», "Orlando" y "Ebili mmiri".
Amuru ya na 1837.
Spanish na-ede akwụkwọ na akwụkwọ akụkọ, nke o dere n'asụsụ Spanish na Galician, na-eburu n'uche na asụsụ obodo ya agaghị anwụ.
Yana Gustavo Adolfo Becquer, bụ onye bu ụzọ dee uri Spanish n'oge a.
Agbanyeghị na ụdị o kachasị tolite bụ akwụkwọ ọgụgụ, Rosalía amaara nke ọma maka abụ uri, ọkachasị ọrụ ya. «Onye Egwu Songs.
Ọ bụ onye ode akwụkwọ nyere aka kachasị na abụbụ Galician-Portuguese, na-enye ya eziokwu ugwu na asụsụ Galician.
Ọ nwụrụ n'ọrịa cancer akpa nwa na July 15, 1885.
Omuma akwukwo nke Akwụkwọ ndị Bekee, nke amara nke ọma maka ọrụ ya "Nganga na akpamoke".
Edere ya edeputara ma debe ya n'uzo di iche iche, dika ndi edemede di iche iche kwuru. Ọ bụ ezie na mmadụ na-ele ya anya dị ka onye edemede na-achọghị mgbanwe, ndị na-akatọ ụmụ nwanyị na ndị nkatọ na-ekwusi ike na enwere ike ịhụ akwụkwọ ya dị ka mkpughe nke echiche ahụ mmuta umu nwanyi site n'aka onye edemede ọzọ: Mary Nwachukwu.
Ọrụ ya ka ewetara ya cine n'ọtụtụ oge.
Edere ọtụtụ n'ime ọrụ ya n'okpuru aha na-eweghị ya dị ka onye edemede ukwu rue narị afọ nke XNUMX.
Inwere Charlotte bronte, onye edemede ọzọ, gaa n'otu n'ime nkatọ kachasị ike banyere akwụkwọ ya.
Ọ nwụrụ ụkwara nta na July 18, 1817 mgbe ọ dị afọ 41.
Spanish onye edemede nke Afọ ndụ edo.
Onye edemede nke obere akwụkwọ akụkọ nke ndị Inquisition na-enyocha ma machibido iwu na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na tupu ha enwee nnukwu ihe ịga nke ọma ma weghachite ha ọzọ.
Ọrụ ya nwere ezigbo ọgụgụ nwanyị.
N'ime iri afọ asatọ, Televisión Española, gosipụtara usoro a maara dị ka "Ogige Venus", nke sitere na akụkọ edemede nke onye edemede.
Gị oru puru iche ha bụ "Andhụnanya na ezigbo akwụkwọ akụkọ", "Ndakpọ olileanya" y "Nraranye na ọbụbụenyi".
Ekwere na ọ nwụrụ na 1661, mana ejighị n'aka.
Okwesiri ighota ndi ozo dika Carmen Martin Gaite, Carmen Laforet, Ana Maria Matute, Simone de Beauvoir na ogologo wdg nke ọrụ ya na ndụ ya dịkwa ịrịba ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede 5 mere akụkọ ihe mere eme
Afọ iri asaa na ise ka agha nke Stalingrad gasịrị. Akwụkwọ ụfọdụ gbasara ya